मुख्यमन्त्रीको अनुगमनपछि सडक मर्मत, सवारी चल्न सुरु – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. मुख्यमन्त्रीको अनुगमनपछि सडक मर्मत, सवारी चल्न सुरु – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
मुख्यमन्त्रीको अनुगमनपछि सडक मर्मत, सवारी चल्न सुरु
१७ कार्तिक २०७७, सोमबार November 2, 2020
पोखरा, कात्तिक १७ । अविरल वर्षाका कारण लमजुङ रामबजारदेखि करपुरटार, भन्ज्याङ, डढुवा, गिलुङ हुँदै मालिङ जाने सडकका ठाउँठाउँमा पहिरो गएपछि सडक अवरुद्ध भयो । सबैभन्दा ठूलो पहिरो भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा जाँदा गाडीहरु आउजाउ गर्न सकेका थिएननन् । आफ्नै ठाउँ र निर्वाचन क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भइरहेको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निरीक्षण गरेपछि अहिले सवारी चल्न सुरु भएको छ ।
असोज १६ गते प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठ र प्राविधिकहरुको टोलीसहित मुख्यमन्त्री गुरुङ उक्त सडकको अनुगमनमा जानु भएको थियो । सो क्रममा स्वयं मुख्यमन्त्रीको गाडी पनि जान सकेन । लठ्ठी टेक्दै वन, भिरपाखा पखेराको बाटो हिँडेर सडकका खण्डखण्डको अवस्था निरीक्षण गरेपछि प्राविधिकहरु र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयलाई सडक तुरुन्तै मर्मतको उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
पहिरो गएको ठाउँमा तारजालीसहितको ग्याबिन वालसमेत लगाई सडक मर्मत गरिएको इन्जिनियर गिरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गरी सडक मर्मत गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक मर्मतका लागि बजेट उपलब्ध गराएको पनि इन्जिनियर गिरीले बताउनुभयो । जनसहभागिता सहित २१ लाख रुपैयाँ खर्चेर उक्त सडक मर्मत भएको हो ।
सडक मर्मत भएपछि लमजुङको डढुवा, टक्सार, गिलुङ, मालिङ लगायत ठाउँ जाने आउनेहरुका लागि सजिलो भएको छ ।सडक मर्मत पछि मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार जनताको नजिक छ, जनताका दुखपीर मर्का छिटो सुन्छ, छिटो देख्छ र समाधान पनि गर्छ भन्ने थुप्रै उदाहरण छन्, एउटा उदाहरण हो रामबजारदेखि करपुरटार, भन्ज्याङ, डढुवा, गिलुङ, साल्मे, मालिङ जाने सडक मर्मत । ”
प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको रामबजारदेखि गिलुङ हुँदै साल्मे, मालिङ जाने सडक चाँडै स्तरोन्नति र कालोपत्रे भएको देख्ने रहर भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १७ कार्तिक २०७७, सोमबार November 2, 2020 481 Viewed